2011: Waxa laga filayo: CAD-Qalabka CAD - Geofumadas
Janaayo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Saaxiibadayda, waxay ku qaateen fasaxyada, hatchies, nacatamales iyo hugsaska sanadka cusub. Way wanaagsan tahay inaad ku soo noqotid dhinaca nolosha, sanadka fiican ee warka.
AutoCAD ka timaadaa 3 sano isagoo interface ka jeestay, oo waxaa la sheegay in tani waxay noqon kartaa sanad guul sidii ay ahaayeen 2000, 20004, 2007 0 2010.
Dhinaca kale Bentley wuxuu soo galayaa sanadka labaad ee uu soo geliyay i (oo lagu daray 3 Select) oo ku jira version 8 oo soconaya muddo toban sano ah. Sidaa daraadeed, waxaan u maleyneynaa in labaduba ay wax u keenaan hal sanno oo aan la ogaan karin iyo caqligalka ah taxanaha oo sheegaya in waqtiga isbeddelka weyn ee tani uusan sii ahaan karin afar sano ... waqti hore
Waxay u badan tahay in bartamihii bishii May waxaanu goobjoog ka nahay soo saarida AutoCAD 2012 -kuqoray sanadkaan sida Ironman- iyada oo ku saleysan labada isbeddel ee ugu dambeeyay ee aan aragno tan 2008. Illaa iyo hadda maaha mid aad u cad, sababtoo ah liiska codsiyada ayaa ka dhaqso badan isticmaalka iyo inkastoo ay suurtagal tahay download AutoCAD 2012 Lacag la'aan, ujeedo tijaabo ah, wax yar ayaa laga hadlay.
Xulashada koowaad waxay tahay in lagu adkeeyo guuritaanka software legacy oo ku salaysan khadadka taliska iyo inoo qasbo in aan isticmaalno badhamada sida ay tahay. Tani waxay u fiicantahay dhinaca weyn ee guddiga aruurinta, sababtoo ah waa in lagu khasbo in ay isticmaasho shaybaarada loo adeegsado, halkaa laga rabo in ay qalliin ka dhigto maalin kasta, oo ka fakaraysa shaqooyinka iyo sheyga halkii ay ka noqon lahaayeen Jaantuska sawirada diyaaradaha. Qaar badan oo ka mid ah horumarkii ugu dambeeyay ee AutoDesk ay ku sameysey 2010 iyo 2011 ayaa ku socda jihadaas inkastoo ayan weli u malaynaynin in ay BIM u qoondeynayaan heerarka siman ee fudud. Iska ilaali haddii aad rabto inaad sameyso waxay soo jeedin kartaa in 2013 ay u baahan tahay (kale) version (d) kale, ma aha sababtoo ah waxay ku mashquulsan tahay, sababtoo ah waa jimicsi xiiso leh oo lagu soo celiyo tartamayaasha kartida leh.
Waxaan jeclaanay waxyaabo ay ka mid yihiin daahirka, caqabadaha, iyo fursadaha lagu qarinayo walxaha iyaga oo aan isticmaalin aalado cadcad; Si kastaba ha noqotee, ma jiri doonto waxyaabo xun oo tartanku u eg yahay, sida aragtida firfircoon ee madaxbanaan si aad uga hesho shaqo badan oo leh kormeerayaal badan. AutoCAD 2011 horay u caddeeyeen in aad loo dardar karaa xawaare ka badan, AutoCAD 2012 rajeynayaa sii wadaan in ay sidaa sameeyaan, xataa haddii ay taasi dheer in uu ka tago hagaajinta ee haya'ad (taas lafteedu waa huriye iyo maalmood).
Ujeedada kale ee aan arki doonno waa in aan ka faa'iideysano waxyaabo badan oo ka mid ah niche Isticmaalayaasha Mac. Ma aha inay kugu adkaato, mana u maleynayo inaad ka fekereyso inaad qaadato ArchiCAD oo ka baxsan suuqa, taas oo horey u qaadatay dhadhanka "Architects". AutoDesk waxay u socotaa isbedel muddo dheer ah, sababtoo ah waxay ku muujineysaa waxa badan oo soo jeediyay, in shirkadda cadaanka ah ee loo yaqaan 'white-line company' waa ballanqaadka sanadka xiga ee 5 ka hor intaan la dhicin wakhtiga ugu dambeeya ee PC-ga. Fikradayda, AutoDesk waxay ku adkeysan doontaa shaqada on Ipad oo ka faa'iideystaan ​​arsenal in Maya, Revit, Inventor iyo kuwa kale ee ka mid ah mawduucyo khaas ah sida Civil3D oo tilmaamaya in sanadkan aanu aaminsanahay in uu iman doono version manzanita.
Haddii uu sameeyo, waxaan ku dhaartay inuu i iibsaday Air. -Ja, iyoWaan jeclaan lahaa-
Si kastaba ha noqotee, barnaamijka leh heerkan ah jaangooyooyinka, iyada oo la joogitaanka dadweynaha ee suuqa saamiyada, ayaa kufilmaamaya in badan oo lagu yareeyo tartanka marka loo eego soo-noolaanshaha (waa dareenka cad ee maalgashadayaasha). Hel inta ugu badan ee lo'da ka hor inta aan dhibicku iman. Laakin shaki kuma jiro in koox ka mid ah kuwa furfurka ah lagu xiro qeybta hoose ee fikirka aan la qiyaasi karin, waxayna na yaabeen wax ka badan isla amarrada miiska geek, iyada oo khatarta la og yahay in ay qaadaan dadka aan Yuhuudda ahayn ee shirka ganacsiga.
Sanad weyn oo loogu talagalay Bentley, kuwaas oo aan ku sii wadi karin xulkiisa Select a in ka badan 4 noqon lahaa dhammaadka hal abuurka maqan (magaca). Maxaa dhacaya waa in sigaar-cabista shirkadan, oo aan ahayn dadweynaha laakiin dhaxalka qoyska ayaa siinaya xorriyad dheeraad ah si dib loogu eego ugu dhowaan doono. Sidaas awgeed waxaan filan karnaa magac ka sarreeya kalsoonida V8, oo aad ku adkaysato inaad isticmaasho, xitaa haddii ay tahay in la sameeyo isku mid laakiin aragti ka baxsan vector.
Fikradayda, dareenka ay Bentley ka faa'iideysan doonto ayaa noqon doonta I-model Taas macnaheedu waxa weeye dadka la Navigator DGN iyo shaki la sumcadda weyn, laakiin dhibaatada ma fududa haddii ay nala noqoto in Bentley ayaa doonaya in ay joojiyaan la yaqaan, waayo Microstation iyo bandhigo Project iyo Hantida falsan falsan ka baxsan uu suuqa maxaabiis ahaan. istaraatijiyad A wanaagsan sii xoojin lahaa xidhiidhka ka dhexeeya khadadka injineernimada, dhirta, naqshadaha iyo shabakadaha agagaarka simayo la format la yaab leh in u muuqataa keenay ka yimaadeen adduunyo kale, in kastoo aan la aqoon in badan oo caalamka this.
Waxyaabaha la yaabka leh waa in ay mar walba noqon doonto isla dgn v8.
doonaa waxaan sugi inay i yaab, sababtoo ah dhibaato ku ah in ay noqdaan emporium ah dhashay waxba iyo halista ay dhaleen waa yar xiiso uu dhaxalka keeni karta in fikradda ah liiska suuqa saamiyada ama aan ka helo wax iibsadaa weyn (haddii ay waa in ay la mid tahay dhiirigelin isku mid ah). waa faa'iido Waa maxay si ay u horumariyaan codsiyada on xfm for darbi in niches meesha Microstation meeleysan yahay, waayo, ma hubo in uu noqon doono socon kara mustaqbalka fog. Inkastoo VBA iloobin in sida AutoCAD 2011 isaga tagay, Bentley ilaa doonaa tago wax kasta oo ay .net.
Marxaladaha kale waxaa jira kuwo kale oo weyn, halkan, waxay yihiin kuwa ka muuqda joogitaan dheeraad ah. Si ka duwan GIS iyo qaabaynta, meeshi furan ee Open Source ayaa lahaa sida tartan culus ugu yaraan akhristo oo wax ka beddesho nuqulkii ugu dambeeyay ee dwg ama dgn. Waxaan u maleynayaa in labaduba ay leeyihiin is afgaranwaa midba midka kale si uusan u furin booska, oo ah mid u roon runtii OS, inkastoo ay naga dhigtay faa'iidada leh in wada shaqeyntu u dhaxayso maalin kasta. Sidaas ma ogi haddii aan ka filan karno wararka QCad, BRL-CAD iyo kuwo kale oo ku socda agagaarka si aan loo ogaan karin oo aanan xitaa ka fekerin kuwa kale.
Midka ugu dhowaa waa IntelliCAD, kaas oo, la bixiyay, wuxuu doonayay inuu ka faa'iidaysto sumcaddii hore ee AutoCAD. Iyada oo khasaaro ah in this qaadataa in ka badan oo kaliya isagoo raqiis ah in ay saameyn ku, iyada oo keliya Ribbon AutoDesk ka 2009 iyagii kaga tegey sallaxa ah saareen, oo ku salaysan shuruudaha la mid ah istiraatiijiyadda dagaalka caan, -Raaxaysta- oo aan shaki ku jirin qaar ka mid ah iyo xumaan fudud
Mana aha inaan rajeyno in biyaha diirran loo soo saaro maaddo isku mid ah (CAD, ma aha codsiyada). Laakiin ma dhaawaceyso inaan soo laabano tani qabanayaan wixii la mid ah sida cusub sida ay gaareen baararka saari tirtire budada graphite ama tirtire korontada, Been aan xagjirka ah, laakiin nolosha bedelay maxaa yeelay, iyagu bixiyo wixii lagu qasacadaysan.
Saaxiibka ah ee laalaabtay si aanad u baahnayn inaad raad raacdo diyaarad kasta oo horay horay u joogtay, ayaa joojiyay in ay samayso markii xml ay nolosheeda u dirtay. Waxaa hubaal ah in aan aragno isbeddello badan oo ku jira CAD-da kaasoo naga dhigay inaga badalno in booska iyo Magaca Cartoonist ee Cadista.
Qeybtayda waxaan rajeynayaa in saaxiibadaa ay ku adkeystaan ​​fududeynta waxyaabaha aan horey u qabannay, eeg in aan Steve Jobs doonayo inuu naga qaato qorshayaasha iyadoo ciddiyaha. Isagoo ku adkeysanaya inaanan rabin inuu qalin u sameeyo iPad-ka ayaa walwal iga qabaa.
Post Previous«Previous Noocyada iyo safarrada fasaxa
Post Next + Dulucda in 3 sano egeomatesNext »
Hal Jawaab u dir "2011: Waxa laga filayo: Mashruucyada CAD"
Autocad 2012 ee fiidiyowga 200 si ay guriga uga bartaan http://www.peruviantec.tk